China Needle Roller Bearings vagadziri uye vatengesi |Xinri
Tsono roller mabearings ane cylindrical rollers ari madiki dhayamita zvichienderana nekureba kwawo.Iyo yakagadziridzwa roller/raceway profile inodzivirira kushushikana kwepamusoro kuti iwedzere kubereka hupenyu hwesevhisi.
XRL inopa mabheji etsono mumhando dzakawanda dzakasiyana-siyana, dzakatevedzana uye muhukuru hwakasiyana-siyana, izvo zvinoita kuti zvive zvakakodzera kune zvakasiyana-siyana zvekushanda uye kushandiswa.
1. Needle roller bearing is compact in structure, small in size and high in rotation accuracy, uye inogona kutakura imwe axial load paunenge uchitakura high radial load.Uye chimiro chechimiro chechigadzirwa chakasiyana, chakakura chinochinjika, chiri nyore kuisa.
2. Iyo yakasanganiswa tsono roller bearing inoumbwa necentriole tsono roller uye kukanda bhora rakazara, kana kukanda bhora, kana kukanda cylindrical roller, kana angular contact ball, uye inogona kutakura unidirectional kana bidirectional axial load.Inogona zvakare kugadzirwa zvinoenderana neakakosha maitiro evashandisi.
3. Iyo yakasanganiswa netsono roller bearing inoshandiswa mumakwikwi ekutakura apo shaft inofananidzwa inogadzirwa, iyo ine zvimwe zvinodiwa pakuoma kwekutakura.
Inoshandiswa zvakanyanya mumichina maturusi, metallurgy muchina, machira emuchina nemichina yekudhinda nemimwe michina yemuchina, uye inogona kuita kuti dhizaini yedhizaini iwedzere compact uye dexterous.
Zvakapfuura: Kanda Bhora Bearings
Zvinotevera: Cylindrical Roller Bearing